तेस्रो त्रैमाससम्म अपर तामाकोशी १ अर्ब ६५ करोडभन्दा बढी नोक्सानीमा - Aarthiknews
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड रू. १ अर्ब ६५ करोड ६ लाखभन्दा बढी खुद नोक्सानीमा रहेको छ । गत वर्ष यस अवधिसम्म कम्पनीको खुद नोक्सानी रू. ३ करोड ५० लाखभन्दा बढी मात्र थियो । कम्पनीले यस वर्ष विद्युत विक्रीबाट रू. ५ अर्ब १६ करोड ३३ लाखभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ । गत वर्ष यस अवधिमा कम्पनीले विद्युत विक्री गरेको थिएन ।
विद्युत विक्रीबाट आम्दानी गरेपनि यस वर्ष कम्पनीको वित्तीय खर्च भएकाले नोक्सानीमा बृद्धि भएको हो । गत वर्ष वित्तीय खर्च नभएको कम्पनीले यस वर्ष यो शिर्षकमा रू. ३ अर्ब ५५ करोड ५९ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्तापूँज रू. १० अर्ब ५९ करोड रहेको छ । जगेडा कोष रकम रू. २ अर्ब ७१ करोडभन्दा बढी ऋणात्मक छ ।
कम्पनीको दिर्घकालिन कर्जा रू. ४१ अर्ब र अल्पकालिन कर्जा रू. ५ अर्ब १० करोड रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई गत भदौ २५ गतेदेखि पूर्ण रुपमा व्यापारिक उत्पादन गर्दै आएको छ । तेस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ७४ दशमलव ३७ रहेको छ ।